भव्य रानीपोखरी सर्वसाधारणका लागि खोल्ने तयारी « Janata Samachar
भव्य रानीपोखरी सर्वसाधारणका लागि खोल्ने तयारी
काठमाडौं । पुननिर्माण गरिएको रानीपोखरीको भव्यताले अहिले धेरैको मन लोभ्याएको छ ।
ऐतिहासिक र धार्मिक रुपमा निकै महत्वपूर्ण रानीपोखरीको बाहिरी सौन्दर्य पनि साँच्चिकै लोभलाग्दो छ । त्यसैले धेरै उपत्यकावासी रानीपोखरीसँग साक्षात्कार गर्न आतुर छन् । धेरैको मनमा बुधवार राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन गरिएको रानीपोखरी सर्वसाधारणका लागि खुल्छ कि खुल्दैन ? खुल्छ भने कहिले ?
मल्लकालीन सम्पदा रानीपोखरी राजधानीवासीको गौरवको रुपमा समेत रहेको छ । त्यसैले पुननिर्माण गरिएको रानीपोखरी सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्ने राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको योजना छ ।
यसबारेमा काठमाडौं महानगरपालिकासँग मिलेर कार्यविधि बनाइने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी सुशील ज्ञवालीले बताउनुभयो । तर कार्यविधि तयार नभए पनि रानीपोखरी सर्वसाधारणका लागि खुल्ला राखिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख कार्यकारी ज्ञवालीका अनुसार तत्कालका लागि दैनिक सीमित संख्यामा मात्र सर्वसाधारणलाई रानीपोखरीभित्र जान दिने योजना रहेको बताउनुभयो ।
मान्छेहरू रानीपोखरी कस्तो बन्यो भनेर हेर्न उत्सुक छन् । त्यसैले विहीवारबाटै रानीपोखरी घुम्न आउने सर्वसाधारणलाई प्रवेश दिने योजनामा प्राधिकरण रहेको उहाँले बताउनुभयो । तर अहिलेलाई भीडभाड नहुने गरी थोरै मान्छे मात्र पठाउने कि भन्ने सोंच प्राधिकरणको रहेको छ ।
अबको एक–दुई महिना रानीपोखरीप्रति सर्वसाधारणको चासो र आकर्षणको अध्ययन गरेर थप नीति बनाइने ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
रानीपोखरी प्रवेश सशुल्क गर्ने कि निशुल्क भन्ने पनि तय नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तर अहिलेलाई भने पैसा तिर्नुनपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
तर रानीपोखरी संरक्षण अभियानका अभियान्तहरुले भने रानीपोखरी सर्वसाधारणका लागि तत्कालै खुला गर्न नहुने बताएका छन् ।
पुननिर्माण गरिएको रानीपोखरीको चर्चाले अहिले थेग्नै नसक्ने भीड लागेर व्यवस्थापन गाह्रो हुने र गहिरो पोखरी भएकाले सुरक्षा जोखिम पनि उत्तिकै हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
जमल र शान्ति वाटिका पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र रानीपोखरी खुला गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । प्राधिकरणले दोस्रो चरणमा जमल र शान्ति वाटिका पुनर्निर्माण गर्दैछ ।
सरकारी तालमेलकाे अभावमा निजी वनको उत्पादन बेच्न समस्या
वन ऐन कठोर भएका कारण पनि निजी वन मासिने क्रम बढेको छ भने नयाँ वन